China Custom eco-hushamwari kushambadzira kanivhasi yekotoni tote bhegi ine logo yakadhindwa Mugadziri uye Mutengesi | Zhihongda
Yakasarudzika eco-hushamwari kushambadzira kanivhasi yekotoni tote bhegi ine logo yakadhindwa
MACHINE WASHABLE & ECO-KUSHANDIRA MATERIAL E KOTONI. Izvo zvakagadzirwa neakakura uye yemhando kanivhasi, iyo inogona kubata kusvika makumi mashanu+ mapaundi ezvekutengesa uye inotsiva 2-3 yakajairwa grocery mabhegi. Nekushandisa zvekare mabhegi eresitorendi anorema basa rinorema & kuchengetedza mapurasitiki kunze kwenzvimbo dzekuzadza & makungwa!
1. Ruvara rwakasarudzika, saizi, mhando, nezvimwe, zvese zvinodiwa zvinogona kuwanikwa
2. MACHINE WASHABLE & ECO-YEMAFARA MATERIAL E KOTONI. Izvo zvakagadzirwa neakakura uye yemhando kanivhasi, iyo inogona kubata kusvika makumi mashanu+ mapaundi ezvekutengesa uye inotsiva 2-3 yakajairwa grocery mabhegi. Nekushandisa zvekare mabhegi eresitorendi anorema basa rinorema & kuchengetedza mapurasitiki kunze kwenzvimbo dzekuzadza & makungwa!
3. Yakanakira mapurojekiti nezvipo! Yakakura yeiyo DIY! Yakakwana yezuva raamai chirongwa, DIY zvirongwa! Kugadzira zveKisimusi zvipo! Iwo mabhegi evasvas anoshanda ekugadzira chero epasi sublimation mifananidzo. Chiitiko chikuru chebato! Iwe unogona kushandisa acrylic pendi uye vana vakaputika. Saizi yakanaka uye yakanaka kumachira ekupenda.
4. Kufungisisa kuti chii chaungape kune chirongwa chehunyanzvi? Aya mabhegi aine pfungwa yekuzvishongedza ivo pachavo neyekugadzira pendi. Hunhu Hukuru, yakashambidzwa zvakanaka, ichave yakakwana yekushongedza! Yakakwana kupenda! Yakakura tote yekushandisa HTV kune yezvakagadzirirwa zvipo! Aya mabhegi ndiwo akakosha tote saizi. Vanogona kukodzera zvakawanda zvezvinhu mukati mavo uye zvakagadzirwa chaizvo. Iwe unogona kushandisa acrylic pendi uye mabhurashi ekupenda.Iyo ingori yakatetepa zvakakwana kuti ipende pamusoro payo! Iwo akanaka saizi akabata machira pendi zvakanaka.
5.1 GORE HAPANA-RIP CHIITIKO: Isu tinotsiva kana kudzorera chero mabhegi anobvaruka kana kutyora mukati megore rimwe rekutenga. Sevha Mari pane Akawanda Piece Maodha nemaYedu PAKESI!
Item Zita Yakasarudzika eco-hushamwari kushambadzira kanivhasi yekotoni tote bhegi ine logo yakadhindwa
Pashure: Natural eco isina donje kanivhasi tote mini bhegi rebhuruu kanivhasi yekutenga bhegi ine logo
Zvadaro: China mutengesi canvas tote bhegi kudhinda beach bhegi kanivhasi tote donje bhegi
Reusable 12oz Shopping Bag DIY patani yeCraf ...
Custom akadhindwa Eco-ushamwari Black Plain Cotton ...
Munhu zvichienderana Colorful Friendly Eco Black Joint ...
Zipper Pen Case zvizorwa Canvas Custom homwe Sc ...
Wholesale tsika dema Tote bhegi pamwe rokudhinda f ...